Dhamaadka Bishaan oo la dooron doono Golaha deegaanka Magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso – Kalfadhi
Golaha deegaanka magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso ayaa waxaa horay u kala diray madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas Bishii Abriil. Waxaana laka dooran doonaa 25-ka iyo 28-ka bishan Agoosto.
25-ka bishaan Garowe waxaa la dooran doonaa hoggaanka golaha deegaanka Garowe, halka Boosaasa-na la dooran doono 28-ka isla bishaan.
Mamulka Gobolka Bari waxa ay hore u sheegeen in golaha deegaanka Boosaaso ee la dhisayo 28-ka bishan aan lagu soo dari doonin xubnihii hore ee golahaasi.
Yuusuf Maxamed Wacays, guddoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in uu rejeynayo in golahan la dhisayo ay ka duwanaan doonaan kuwii hore ee madaxweyne Gaas kala diray.
20-kii bishaan Agoosto ayaa sidoo kale lakala diray golaha deegaanka Badhan oo isla la filayo in dhawaan lasoo xulo.
Xildhibaanno Dood Ka Keenay Hannaanka Qeybinta Guddiyada Golaha Shacabka